Kume nse ukusebenza enkantolo ngenxa yebhomu | Eyethu News
Kume nse ukusebenza enkantolo ngenxa yebhomu
“Abasebenzi bathe ababuyeli emsebenzini basathukile.”
Esithombeni : amaphoyisa ophiko lwe-K9 ngenkathi esesha ibhomu ngezinja.
KUSUKE isiphithiphithi enkantolo yaseMnambithi ngenkathi kungena wokuthi kunesiqhumane esiyingozi ngoLwesihlanu ekuseni, nokuholele ekutheni kumiswe ukuqulwa kwamacala njengoba wonke umuntu obesenkantolo ebaleke wathi galo yephuka ngenkathi kungena lombiko.
Iziphathimandla zenkantolo okubalwa nezimantshi, abameli, abashushisi, abasebenzi basenkantolo kanye nabamangali, bonke babonakale begcwala ku-Keate Street ngemuva kwalombiko. Loku kushiye abasebenzi balenkantolo bethukile njengoba abanye bebezwakala bethi angeke balubhade emsebenzini ngenxa yokuthuka.
Uphiko lwamaphoyisa olubhekele ukucinywa kweziqhumane eziyingozi nobeluvela eNewcastle lube selufika kulenkantolo, nalapho luhlole khona lenkantolo kanye nezimoto ebezipake ngaphandle kwatholakala ukuthi belingekho ibhomu ebelitshalwe kulendawo.
Kukhuzwe ukufakana ezinkantolo kwabe-ANC